FAALADDA WARKA: Madaxda Dawladdaha xubnaha ka ah DF Soomaaliya ma iskugu tagi doonaan Kismaayo? – PUNTLANDTIMES- KA DHIGO ISHA WARARKA EE CAALAMKA & SOMALIA
Home 2017 September Faallooyin, W.Gudaha, Wararka Maanta FAALADDA WARKA: Madaxda Dawladdaha xubnaha ka ah DF Soomaaliya ma iskugu tagi doonaan Kismaayo?
FAALADDA WARKA: Madaxda Dawladdaha xubnaha ka ah DF Soomaaliya ma iskugu tagi doonaan Kismaayo?
September 26, 2017 · by	W LAASCAANO · 0
KISMAAYO(P-TIMES)- Saacado uun markii Madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam (Axmed Madoobe) ku dhawaaqay in uu gogol wada hadal u dhigayo hogaamiyaasha dawladdaha xubnaha ka ah dawladda Faderaalka ee Soomaaliya, waxaa soo baxaya xogo kala duwan.
Madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe ayaa muujiyey kaalin geesinimo leh, casumaadiisa ayaana ah mid ay dhinacyadu siyaabo kala duwan uga jawaabi doonaan.
Madaxweynaha Galmudug oo kasii horeeyey ayaa ku baaqay shir deg deg ah oo ay yeeshaan dhinacyadu, ayna uga wada hadlaan dagaalka uga yimid dhinaca dawladda Soomaaliya.
Warar hoose ayaa sheegaya in Madaxweynaha Jubbaland fikraddan ay la wadaagaan Hogaamiyaasha dawladdaha xubnaha ka ah qaarkood, oo ay horeyba u soo jeediyeen in loo baahan yahay in runta loo sheego Madaxda cusub ee Soomaalida.
Gogoshan siyaasadeed ayaa lafilayaa in ay dhacdo bisha October ee nagu soo aadan dhamaadkeeda, sidda ay sheegayaan warar laga helayo Madaxtooyada Jubbaland, iyadoo ay ku xiran tahay hadba sidda ay dhinacyaddu u aqbalaan.
Doodaha xiisaha leh ayaa arrimaha dibadda, Kheyraadka sidda loo qeybsanayo iyo qorshaha gaarka ah ee ay wadato Xukuumada Soomaaliya, kaas oo hadda ah qorshaha ugu badan ee ay dhinacyadu isku hayaan.
Lama garanayo waxa ka soo bixi doona shirka Kismaay, maadaama aysan siyaasad aheyn xataa dhinacyada dawlad gobaleedyada oo ay qolo kasta ay siyaasadeeda gaarka ah wadato.
Filed in: Faallooyin, W.Gudaha, Wararka Maanta